China Drawstring bhegi yakasikwa ruvara isina chinhu donje dhizaini dhizaini yekugadzira kanivhasi bundle homwe inogona kudhinda logo Mugadziri uye Mutengesi | Zhihongda
Drawstring bhegi rakasarudzika kara donje dhizaini tambo yekugadzira kanivhasi bundle homwe inogona kuprinta logo
VERSATILE UYE MULTIPURPOSE KUDZIVA BAG SET - Yakanakira kushandiswa kwekudya senge kuchengetwa kwezviyo, zvihwitsi, michero nemuriwo, mabhuku, shangu, strainer yetii, yogati, muto uye mukaka wenzungu, mishonga yekubika nemiti inonhuhwirira kuita muto, kuchengetedza midziyo yakakosha yemukicheni. Zvakare seye cheesecloth. Aya akakwana kuhofisi uye epatry yekuchengetedza.
1. VERSATILE UYE MULTIPURPOSE DRAWSTRING BAG SET - Yakanakira kushandiswa kwekudya senge kuchengetwa kwezviyo, zvihwitsi, michero nemuriwo, mabhuku, shangu, strainer yetii, yogati, muto uye mukaka wenzungu, kubika miriwo nezvinonhuwira kuita muto, kuchengetedza kicheni yakakosha midziyo. Zvakare seye cheesecloth. Aya akakwana kuhofisi uye epatry yekuchengetedza.
2.ZVAKAITIKA, ZVISINA KUSVIMBEDZWA, ZVAKAOMA ZVINOGONESESA MUSLIN POUCHES - Yakagadzirwa neyemhando yepamusoro 100% Cotton / Muslin isina chepfu uye isina kusvibiswa. Bvisa kushandiswa kwepurasitiki uye ubatsire kuchengetedza pasi. Tsiva neaya akanakisa, akatsetseka uye akapfava bhegi rejira iro eco-yakanaka uye mhuri yakachengeteka.
3. BULK YAKAKWANA YAKAKWANA YAKAKURA SIZE PANTRY KUCHENGETA MABHAGU ​​- Hukuru hukuru hunogona kubata zvinhu zvakawanda saka haufanire kunge uine nzendo dzakawanda kana uchiita zvekutenga. Yakanyanya kureruka saka ivo vanonyanya kutakurika.
4. ZVINOGADZIRIRA ZVINOKOSHA DZIMAI DZOKUDYA BHUKU DZEMUMBA NEZVEPANZE - Iwo masititsiti akasimba, asingadziviriri misodzi, uye haazobvaruka nyore nyore kana kubuda kunyangwe huremu hwechinhu chakachengetwa, 100% inovimbiswa.
5. DIY CRAFTS, COTTON GIFT BAGS, UYE PARTY ZVINOFANIRA - Kushanda pane nyowani DIY chirongwa? Aya mabhegi akakodzera iwe! Iwe unogona kupenda izvi kana chimiro uye nekuzvishongedza nenzira chero yaunoda. Izvi zvakare zvakakura kunge pati kana muchato unofarirwa kana seakanaka zvipo mabhegi. Ipa sezvipo zvemazuva ekuzvarwa, Kisimusi uye mamwe mazororo. Aya ndiwo chete mabhegi iwe auchazomboda ako ehunyanzvi uye ehunyanzvi chirongwa. WEDZIRA KUTAI ZVINO! 2.
Item Zita Drawstring bhegi rakasarudzika kara donje dhizaini tambo yekugadzira kanivhasi bundle homwe inogona kuprinta logo
Kushandisa Kutenga, Kukwidziridzwa Chipo, Kupakata, Cloth Bhegi, nezvimwe.
Mashoko Cotton kanivhasi 100% donje, 4-20oz, 100gsm-570gsm, 6oz (175gsm), 8oz (230gsm), 10oz (280gsm), 12oz (340gsm)
Saizi 10x15cm, 15x21cm, 20x25cm 25x30m 30x35cm 35x40cm kana saizi yakagadziriswa.
Ruvara Natural ruvara, Chena, Nhema kana yakagadzirirwa zvichienderana neshoko rako
Kuvhara Tambo yekotoni, tambo inokanganisa, nezvimwe.
Zvimiro sandara, mativi ezasi, kutenderera pasi, mativi ezasi uye gusset
LOGO Yakasarudzika logo
OEM & ODM Ehe, tinogamuchira!
Kudhinda silika skrini yekudhinda, foil bronzing uye kupisa kupisa kudhinda, Thermal sublimation kudhinda, Dhijitari Kudhinda, nezvimwe.
Gadzira nguva Mazuva 15-25, zvichienderana nehuwandu hwako.
Kurongedza 200 bv / atorwa, kana maererano vatengi 'chinodiwa
Shipment nzira negungwa, nendege, nekutaura
Mharidzo 1). mharidzo nguva: Mukati memazuva 3-5.
2). Sample muripo: Maererano chigadzirwa mashoko.
3). Semuenzaniso kudzoserwa: ehe kana yakawanda yakawanda
4). Kuenzanisira kuendesa: UPS, FedEx, DHL,
5). Yedu stock stock ndeye mahara, asi iwe unofanirwa kubhadhara iyo sampuro yekutakura
Nguva yekubhadhara 30% dhipoziti neT / T pamberi, 70% chiyero neT / T isati yatumirwa
L / C, D / A, D / P, Western Union, Paypal, Visa, Debit Kadhi, Kiredhiti Kadhi
FOB chiteshi Chengdu kana Shanghai.
Kudhinda kweSilkscreen: isa kune dhizaini ine mashoma mavara.
Yekudhinda Yekudhinda Kudhinda: isa kune dhizaini inovhara idiki uye ine akawanda mavara.
Dhijitari Kudhinda: isa kune dhizaini inovhara yakakura uye ine akawanda mavara.
Ndapota titiudze zvido zvako zvekudhinda kana titumire yako dhizaini mifananidzo, isu tinokurudzira nzira yakakodzera kwazvo yekudhinda kwauri.
Kazhinji, Tinoshandisa 6oz (175gsm), 8oz (230gsm), 10oz (280gsm), 12oz (340gsm) zvinhu kugadzira donje kanivhasi bhegi. Iwe unogona kusarudza imwe hukobvu zvinhu sezvaunoda. Tinogona kugutsa zvese zvaunokumbira.
Unogona kusarudza muvara. Isu tinopa zvinhu zvekotoni kanivhasi mumarudzi akasiyana siyana. Kazhinji, Ruvara rwechisikigo rwakajairwa. Ndapota titiudze kuti ndeupi muvara waunoda.
Tinogona kugadzira mhando zhinji dzedonje kanivhasi bhegi. Kana iwe uine dhizaini, zviri nani. Kana iwe usina chero dhizaini kana zano, hazvina basa. Tine ruzivo rwakawanda rwekugadzira masaga ekotoni kanivhasi uye isu tinogona kupa mamwe mazano kwauri.
Cotton / Canvas mabhegi
Asina kurukwa mabhegi
Akasungwa mabhegi anotonhorera
Bhegi yetrolley nemavhiri
Zvizorwa zvipenga mabhegi echimbuzi
1. Q: Ndinogona gadzirisa mabhegi angu?
A: Tinogona kugadzira mabhegi zvinoenderana nezvaunoda.
2. Q: Ndinogona here kupurinda yedu yega logo pane zvigadzirwa zvangu.
A: Hongu, Tinogona kudhinda logo yako pane zvigadzirwa zvako. Chete isu tinoda kuti iwe upe yako logo faira muPDF kana AI fomati.
3. Q: Yakawanda sei chigadzirwa?
A: Mitengo inotemwa nezvinhu zvakawanda senge zvinhu, dhizaini, saizi uye nezvimwe. Kana iwe ukandiudza izvo chaizvo zvigadzirwa zvinodiwa, isu tinogona kupa yakanakisa mutengo kwauri.
4. Q: Ndeipi nguva yekugadzira?
A: Mazuva 15-25 zvakajairwa, zvinoenderana nehuwandu. Ndokumbira utitaurire zuva raunoda, tinogona kuedza nepatinogona napo kukugutsa.
5. Q: Zvinoita here kuti utore sampuro usati waisa odha?
A: Ehe, chokwadi, yemhando yepamusoro & kuongorora zvinhu, masheya masheya asina kudhindwa akagadziridzwa anogona kupihwa zvakasununguka kuaccount yako yekambani. Tichafara kukutumira mahara sampuli.
6. Q: Zvinotora nguva yakareba sei kune iyo sampuli yekugadzira nguva?
A: 1 zuva remasampuli aripo. Mazuva 3-5 emhando dzakasarudzika sampuli.
7. Q: Kodhi yangu inotumirwa sei? Homwe dzangu dzichasvika nenguva here?
A: Negungwa, nendege, kana neanotaura vatakuri (UPS, FedEx, TNT) nguva yekufambisa inoenderana
8. Q: Ndeapi mazwi ekubhadhara?
A: 30% T / T dhipoziti, 70% mwero usati wasununguka.
30% T / T dhipoziti, 70% mwero uchirwisa BL.
100% pamberi, L / C pakuona, Western Union / Paypal yemari shoma yekubhadhara.
9. Mubvunzo: Kuti uwane mutengo, ndeapi mamwe madikanwa anodikanwa kutitaurira?
A: Chinyorwa, saizi, chimiro, Ruvara, logo chimiro, logo saizi, logo kudhinda mazwi, huwandu, uye zvimwe zvinodiwa.
Pashure: Eco-Inoshamwaridza Tambo Yevanhu Cotton Chipo Bhegi Yekutakurisa Drawstring Yekuzora Bhegi
Zvadaro: Yakasarudzika Tsika yemhando yepamusoro fashoni kotoni kanivhasi dhizaini tambo
Ruvara Kwakachena Cotton Canvas Tote Bag Gusset Thi ...
Munhu zvichienderana Custom yepamusoro fashoni donje ...
Fashion magadzirirwo zvakasikwa donje rinorema-basa kanivhasi ...
Wholesale tsika Logo promotional bani beige C ...
Factory mutengo Black Cotton kanivhasi drawstring ba ...
Heavy Duty Reusable Cotton Grocery Shopping Inogona ...